Global Voices teny Malagasy · 4 Aogositra 2017
Tantara tamin'ny 04 Aogositra 2017
Fifaninanana Tononkalo Momba ny Andron'ny Mpifankatia Nokarakarain'ny Global Voices – Ilay Safidin'ny olona!
Mediam-bahoaka04 Aogositra 2017
Nilaza ny heviny ilay MPITSARA NY FIFANINANANTSIKA, sady tamin’ny fomba kanto tokoa. Ary izao dia anananay ny andraikitra mora tanterahina lavitra izay tsy inona fa ny fanambaràna ilay mpandresy araka ny Safidin'ny Olona.
Amerika Latina04 Aogositra 2017
Tamin'ny faran'ny herinandro, naiditra hopitaly noho ny aretim-po ilay mpanao didy jadona teo aloha Augusto Pinochet . Namoha ny fihetsem-pon'ny olom-pirenena Shiliana ny toe-draharaha mikasika ny tantarany . Natao hizarana ny sasany tamin'ireo fanehoan-kevitra ity lahatsoratra ity.
Israely04 Aogositra 2017
Misaona ny tontolon'ny bilaogy Jordaniana noho ny fandraràna ny fivarotana shawarmas misy akoho - akoho, salady, tahini, mifono ao anatin'ny mofo matsiro ireo rehetra ireo.
Iran: Tsy Misy Firenena Hitoeran'ny Hazo Tranainy
Iràna04 Aogositra 2017
Efa ho herintaona izao no nanome baiko ny polisy mba hanadio ny firenena amin'ny "fitaomana tandrefana " sy ny "tsy fahamenarana" ny manampahefana Iraniana. Soa ihany fa voatery nijanona antenatenan-dalana izy ireo.
Azia Atsinanana04 Aogositra 2017
Namely an'i Singapaoro, faritr'i Malezia sy Indonezia ny zavo-tsetroka nateraky ny doro tanety tsy ara-dalàna. Ireo tantsaha no nanomboka ny afo nandritra ny vanim-potoana maina mba hanadiovana ny tany hambolena. Natevina kokoa ny zavo-tsetroka tamin'ity taona ity na dia efa namoaka ny fampitandremana momba ny fahasalamana aza i Singapaoro .
Ejipta04 Aogositra 2017
Tanora Kyrgyz Kintan'ny Hira Nandà Ny Fanendrena Azy Hitantana Mozea Taorian'ny Fanoherana Mivaivay Antserasera
Azia Afovoany sy Kaokazy04 Aogositra 2017
"Leo mahita vadin'ny manampahefana sy ny zanany mahazo ny toeram-pitantanana izahay ."
Eoropa Afovoany & Atsinanana04 Aogositra 2017